Isibindi simenze wayivulandlela kozakwabo - Ilanga News
Home Izindaba Isibindi simenze wayivulandlela kozakwabo
Isibindi simenze wayivulandlela kozakwabo
USGT Bongekile Khumalo (40), oyiphoyisa lokuqala lesifazane KwaZulu-Natal ukushayela izimoto ezinkulu emaphoyiseni.
LIZISHAYA isifuba ngokuba yivulandlela labesifazane KwaZulu-Natal ukushayela izimoto ezinkulu zomsebenzi ezibizwa ngeNyathi New Generation ezijwayele ukuphuma uma kunemibhikisho noma kunodlame emphakathini – iphoyisa laseMlazi elisebenza ngaphansi kophiko iPublic Order Policing (POP), esiteshini saseMariannhill.
USgt Bongekile Khumalo (40), uthi uyaziqhenya ngesibindi sokushayela lezi zimoto ezesatshwa ngozakwabo abaningi besifazane.
“Kwesinye isikhathi uma sengiyishayela, nami ngize ngingakholwa ukuthi yimina ngempela lo oqhoqhobele le moto esatshwa yiningi labesifazane ngendlela enemicikilisho eminingi ngayo,” esho.
Uthi useneminyaka ewu-12 eyiphoyisa, ungene kulo msebenzi ngoba wayehleli ekhaya engasebenzi isikhathi eside ethi uzama inhlanhla kanti uzoqashwa.
Uthi ungowesifazane othanda ukwenza izinto ezihlukile, akayena umuntu otetemayo okumsizayo ekutheni akwazi ukuzibambela yonke into abhekana nayo empilweni.
Egxogxweni ekhethekile naleli phephandaba abe nayo esiteshini saKwaMashu elungiselela ukuphuma ngayo ingadlangadla ayosebenza uthi bekuthi uma ebuka ubukhulu balezi zimoto, asabe, kodwa kwathi sekufika abaphathi bemnika, yena nozakwabo, ithuba lokufundiswa ukuzishayela, waba ngowokuqala ophakamisa igama lakhe.
Uthi babebancane abesifazane abazinikela, ngebhadi ayenabo bafeyila. Uthi okwenza ozakwabo bangathandi ukushayela le moto wukuthi inkulu kakhulu futhi iphakeme ngendlela eyisimanga, injalo nje inemicikilisho eminingi uma usuyishayela, futhi idinga ukuba ucophelele ngokwedlulele.
Uthi ngenxa yokuthi le moto iphuma iyosebenza uma beyobhekana nezimo ezinzima, kudinga ukuthi ngalesi sikhathi uyishayela, ube wazi kahle ukuthi kumele uvikele impilo yozakwenu osuke ubathwele ngaleso sikhathi, ube ngumuntu osheshayo ukubona inkinga futhi usheshe ukuyixazulula ngoba kwesinye isikhathi bake bafike umphakathi ungasadle nkobe zamuntu, uhlasela ngisho amaphoyisa.
Ngisho echaza ngezinkinobho ezingaphakathi kuyona, kucaca bha ukuthi uyazi kahle into ayikhulumayo.
“Ngiqale ukuyishayela ngo-2018. Usuku lokuqala engayishayela ngalo, kwakumele ngiyisuse esiteshini sethu eMariannhill ngiyihambise edolobheni eThekwini.
“Babengekho ozakwethu besilisa, kukhona mina ngedwa, kwathi uma befona edolobheni bethi iyadingeka, umphathi wabatshela ukuthi ngizoyiletha. Lo ayekhuluma naye ocingweni wayenokungabaza ukuthi ngizokwazi ukufika edolobheni ngiphephile.
“Ngayishayela ngokucophelela ngifuna nokukhombisa abaphathi bami ukuthi le nto ngingayenza noma ngingumuntu wesifazane futhi ngifuna nokuthi bangethembe. Kwathi uma sengifikile edolobheni, ngayipaka kahle ngashaya umthandazo omncane ngibonga kuMdali ngokunginika isibindi,” kusho yena.
USgt Khumalo onabantwana ababili, uthi kwathuka ngisho umyeni wakhe ngosuku lokuqala embona eshayela le moto. Uthi ngisho iphantshelwe yithayi, uyakwazi ukubambisana nozwakwabo balikhiphe ngoba akulula ukuthi umuntu alikhiphe yedwa.
“Le moto ifuna ube ngumuntu okhuthele, ongasabi lutho ngoba ngisho kushintshwa isondo kusetshenzwa ngendlela esiyimanga. Kuyimanje ngiyazihlupha nje ngokufunda ngezingxenye (parts) zayo ezihlukene, ukuze kuthi uma iba nenkinga ngikwazi ukuyibona noma ukuyikhanda.
“Ngingumuntu vele othandayo ukwenza izinto ezinzima futhi kusukela ngikhula nje, bengizifela ngezimoto,” kusho yena.
Ukhuthaze abanye ozakwabo ukuthi bangazithambisi ngokuthi kukhona umsebenzi wamadoda, mabafunde ukubamba yonke into kwazise isikhathi esiphila kusona sesishitshile.
Previous articleOwoKhozi uqophe nabakacothoza
Next articleIsikhulu samaphoyisa sizidubule nenkosikazi bafa